China ahaziri Air Compressor Imeputa na Factory | Binuo
Ikuku Compressor ahaziri
Compressor ikuku bụ ụdị ngwaọrụ na-emepụta nrụgide nke nwere ikuku dị ka ọkara, yana akụrụngwa bụ isi nke sistemu pneumatic. Compressor ikuku na-atụgharị ike nrụpụta mbụ ka ọ bụrụ ike nrụgide gas, ma na-enye ike maka akụrụngwa pneumatic. Ọ bụghị naanị na-eji ọtụtụ ebe, nakwa ihe dị mkpa ma dị mkpa akụrụngwa dị iche iche ubi. Ihe mkpuchi ikuku nke anyị kwuru na-ezokarị aka na kọmpụta ejima ejima. A ụzọ abụọ meshing helical rotors na-ndokota na isi engine nke Compressor. N'èzí okirikiri okirikiri (nke a na-ahụ site na ngalaba obe), anyị na-akpọ rotor nwere ezé convex dị ka rotor nwoke ma ọ bụ ịghasa nwoke, na n'ime okirikiri pitch (nke a na-ahụ site na ngalaba obe), rotor nwere ezé concave ka a na-akpọ rotor nwanyị ma ọ bụ nwanyị. ịghasa.
N'ozuzu, rotor nwoke na-akwagharị rotor nwanyị ka ọ gbanwee dị ka rotor na-arụ ọrụ. Igwe bọọlụ na rotor na-eme ka rotor nweta ọnọdụ axial ma na-ebu ike axial nke compressor. Ntugharị ihe nkedo nke rotor na-agba na nsọtụ abụọ nke rotor na-enweta ọnọdụ radial na agba radial na axial Force nke compressor. Na nsọtụ abụọ nke compressor host, mepee ụfọdụ udi na nha orifice n'otu n'otu.
A na-akpọ otu n'ike mmụọ nsọ, na nke ọzọ a na-akpọ iyuzucha.
N'ime sistemu niile nke nitrogen & ikuku oxygen, kọmpụta ikuku dịkwa oke mkpa. Tupu ịmalite ọrụ Binuo, ndị otu anyị na-eje ozi n'ahịa ahịa ikuku compressor na ahịa ahịa mgbe ihe karịrị afọ anọ. Ma site na nleba anya ọkachamara ma ọ bụ nleba anya ahụmahụ, ọrụ Binuo nwere ike imeju ụkpụrụ nke ihe ndị ahịa chọrọ.
Dabere na ọnọdụ ọrụ nke ndị ahịa na ihe achọrọ, ndị ọrụ Binuo nwere ike ịnye ndụmọdụ na ịre ahịa nke igwe ikuku ikuku ama ama nke mba ụwa, yana ọrụ nkwụsịtụ gụnyere ntinye, mgbe-ahịa na mmezi.
Structure Structure Screw Air Compressor
Ihe ntụtụ mmanụ na-agba mmanụ bụ nke bụ isi injin na injin inyeaka. The isi engine na-agụnye isi engine nke ịghasa ikuku compressor na isi moto, na inyeaka engine na-agụnye iyuzucha usoro, mmanụ ụgbọala injection na mmanụ-gas nkewa usoro, jụrụ usoro, njikwa usoro na eletriki usoro. N'ime usoro ihe oriri na ikpochapu, ikuku free na-abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri nke ikuku compressor mgbe uzuzu na adịghị ọcha na-ehichapụ site na ntinye ntinye ikuku, wee gwakọta ya na mmanụ lubricating na-agbanye n'oge mkpakọ. A na-ahapụ ngwakọta mmanụ-gas a gbakọtara n'ime mmiri nkewa mmanụ-gas, wee ziga ya na usoro eji eme ihe mgbe nkewa mmanụ-gas, valvụ nrụgide kacha nta, ngwa nju oyi na ikuku mmiri.
Na mmanụ ụgbọala injection na mmanụ-gas nkewa usoro, na lubricating mmanụ na mmanụ-gas nkewa drum na-edobe eruba na sekit mgbe ikuku compressor na-arụ ọrụ nkịtị, na ọ dabere na dị iche iche nrụgide n'etiti iyuzucha ọdụ ụgbọ mmiri na mmanụ ụgbọala injection ọdụ ụgbọ mmiri. ikuku compressor. N'okpuru nrụgide dị iche iche, mmanụ lubricating na-abanye n'ime ngwa nju oyi mmanụ, valvụ na-achịkwa okpomọkụ na nzacha mmanụ iji wepụ ihe ndị na-adịghị ọcha na ihe ndị dị na ya, mgbe ahụ, a na-agbanye ọtụtụ n'ime mmanụ lubricating n'ime ụlọ mkpakọ nke ikuku compressor maka mmanu, akara, dị jụụ ma belata mkpọtụ. , na ndị ọzọ na-fesa n'ime ụlọ na-ebu na ọsọ na-abawanye gearbox n'otu n'otu.
Otu nsọtụ ezé ji nwayọọ nwayọọ na-apụ na ntupu ya na mmegharị nke rotor iji mepụta olu nha nha n'etiti. Mgbasawanye nke olu nha nha na-eme ka ụfọdụ oghere dị n'ime. Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikọta olu nha nha nke inter na ọdụ ụgbọ mmiri, nke mere na gas na-aga n'okpuru nrụgide dị iche iche. N'oge ntụgharị rotor na-esote, ezé nke rotor nwoke na-anọpụ iche site na oghere ezé nke rotor nwanyị, ya mere, nha nha nha na-agbasawanye nke jikọtara ya na ọdụ ụgbọ mmiri. Mgbe olu nha nha nke inter rute uru kachasị na rotor na-atụgharị ma kewapụ ya na ọdụ ụgbọ mmiri, usoro mkpali ahụ na-agwụ. Mgbe ahụ, a na-eji mkpuchi mkpuchi mechie ọnụ ọnụ eze nke nwoke na nwanyị rotor, na gas dị na oghere ezé na-agba gburugburu na oghere mechiri emechi site na ezé rotor na casing, nke a na-akpọ usoro akara.
2. Usoro mkpakọ
N'ihi nchikota nke ezé rotor na rotor na-agbagharị, a na-ebelata ụda nke inter eze na-aga n'ihu, na ụda nke gas mechiri emechi na-ebelatakwa, ya mere, nrụgide gas na-abawanye iji nweta usoro mkpakọ gas. Usoro mkpakọ nwere ike ịga n'ihu ruo mgbe ejiri nha nha nha n'etiti ya na ọdụ ụgbọ mmiri iyuzucha.
Mgbe ejikọtara olu nha nha inter na ọdụ ụgbọ mmiri iyuzucha, usoro ikpochapu na-amalite. Mgbe olu inter eze na-ebelata na-aga n'ihu, a na-eji nwayọọ nwayọọ na-ahapụ gas nwere nrụgide njedebe n'ime ya site na ọdụ ụgbọ mmiri. Ruo mgbe ahịrị ndị a kpụrụ akpụ na njedebe nke eze na-arụ ọrụ zuru oke, usoro ahụ kwụsịrị, ka ọ dị ugbu a, a na-ewepụ gas dị n'ime nha nha nha kpamkpam site na ọdụ ụgbọ mmiri na-ekpochapụ, na olu nke mechiri emechi nke nha nha ga-aghọ efu.
✧ Ike ugboro ịghasa ikuku compressor.
Ngwa: Textile, Electronic, Production Industry
✧ Ihe mkpuchi ikuku na-enweghị mmanụ.
Ngwa: Ụlọ ọrụ ọgwụ, Fine Chemical Industry
✧ Special ịghasa ikuku compressor maka laser ọnwụ.
Ngwa: Laser Cutting
✧ Magnet agbanwe agbanwe ugboro ịghasa ikuku compressor.
✧ Abụọ ogbo abịakọrọ ịghasa ikuku compressor.
Ngwa: Textile, Chemical Fiber, Glass Industry
Nke gara aga: Diesel Generator N'ogbe
Osote: Ngwongwo mmiri oyi na-atụ oyi
2 Ogbo ikuku Compressor
Ikuku Compressor Maka ọrịre
Igwe ikuku Compressor Nitrogen Generator
Ọnụ ahịa ikuku Compressor
Nitrogen ikuku Compressor
Ihe mkpuchi ikuku na-enweghị mmanụ
Igwe ikuku Compressor enwere ike ibugharị
Ike ikuku Compressor ugboro ugboro
Abụọ Stage Air Compressor
Igwe ikuku ikuku na-agbanwe agbanwe
Hydrogen na Oxygen Generator, Psa Nitrogen osisi, Ọgbọ ike hydrogen, Holtec Nitrogen Generator, Atlas Copco Ngp, Psa Nitrogen,